ShweNote - Myanmar Book Summary
အကောင်းဆုံး မြန်မာဘာသာပြန် အနှစ်ချုပ်စာအုပ်များ
About ShweNote - Myanmar Book Summary
နိုင်ငံတကာမှာ တစ်နှစ်ကို စာအုပ်အသစ် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ထွက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အလုပ်တွေများလာတာကြောင့် စာအုပ်တွေကများပြီး စာဖတ်ချိန်ကလဲ နည်းလာပါပြီ။
ဒီတော့ ဒီလောက်များတဲ့ စာအုပ်တွေထဲကနေ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စာအုပ်ကို အချိန်တိုအတွင်း ရွေးချယ်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ShweNote က နိုင်ငံတကာမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး သုတစာအုပ်တွေရဲ့ အနှစ်ချုပ် အဆီအနှစ်တွေကို၊ ပြေပြစ်ရှင်းလင်းတဲ့ မြန်မာစကားနဲ့ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
ShweNote application ကို Android မှာရော၊ IOS မှာပါ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး၊ ဖုန်းထဲမှာတင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
▪️အချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်နဲ့ စာအုပ်ထဲက အဓိကအချက်တွေကို သိရှိနိုင်မယ်။
COPYRIGHT NOTICE: The contents and book covers are loaded from public sources.
Waso Learn KG-12MyanLearn - English Online. Schools & Tutors.Shwe English LessonsWun Zinn - Myanmar BookMatric Grammar HelperEnglish ThaddarMM Bookshelf - Myanmar ebook and daily newsEng-Myan DictionaryHtwet ToeiMyanmarHouseEnglish Myanmar Dictionaryရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ်- Shwe Nar Sin Audio BookMyanmar Quran - Burmese language Quran translationTrusty ECommerce Customerေရႊစုဘူး - Shwe Su BooMyanCareTipitaka Pali ( တိပိဋကပါဠိ )Myanmar BibleEnglish for myanmarLann PyaTipitaka MyanmarGreen WayMyanmar Islam Hand BookCdian - Chinese DictionaryBookshelfKaren HymnsDhammapada (ဓမ္မပဒ)